Europapark ဥရောပသားအပေါင်းတို့တွင်အကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်, ညာဘက် Disneyland ပြီးနောက်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ကရှေးခယျြခဲ့ဘာကြောင့်မဖွင့်. ဒါဟာကြောင့် roller-Coaster ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အတွက်ဥရောပအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်၏တဦးတည်းရဲ့. သင်သည်များစွာသောသူတို့နှင့်အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့သူတွေကိုအများကြီးစီးရပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအာသာစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ် – အဖြစ်ကောင်းစွာမှောင်မိုက်စီးနှင့်အတူတစ်ဦးပြင်ပတွင် / မိုးလုံလေလုံတဦးတည်းပေါင်းစပ်ဖွင့်သောနောက်ဆုံးပေါ် roller-Coaster!
သင်ဤရှာနိုင်သည် Rust အတွက်အံ့သြဖွယ်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ, Freiburg နီးစပ်သူတစ်ဦးမြို့နှင့် Strasbourg. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရထားမျှမျှတတအလွယ်တကူ Europapark ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, မည်သည့်မြို့ကနေ. အဆိုပါ ဘူတာရုံ အချို့သော 4km သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဝင်ဝမှလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ဝေးဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်များထဲမှယူ ဘတ်စ်ကား သောပန်းခြံကိုသွား.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)